ဘ ဝ မှာ အခက်အခဲတခုခု ကြုံလာ ရင် တနေ့ (၉) ပတ် စိပ်ပြီး (၉)ရက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ – စွယ်စုံသုတ
ဘ ဝ မှာ အခက်အခဲတခုခု ကြုံလာ ရင် တနေ့ (၉) ပတ် စိပ်ပြီး (၉)ရက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ
စိတ်ပျံ့လွင့်သူများ အတွက် ပုတီးစိပ်နည်းလေး ပေးပါ့မယ်။ ပုတီးစိပ်နည်း အမျိုးမျိုးရှိလို့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စိပ်လို့ရပါတယ်။ တခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲ စိပ်စေချင်ပါတယ်။ဦးဇင်းပေးတဲ့ ပုတီးစိပ်နည်းလေးကို အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ တခါ်တလေ ကိုယ့်ဘဝမှာ အခက်အခဲ တခုခု ကြုံလာရင် တနေ့ (၉)ပတ်စိပ်ပြီး (၉)ရက် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပြီး စိပ်ကြည့်ပါ။
တစ် ရက်တည်း( ၉ )ပတ်ကိုတခါတည်းမစိပ်နိုင်ရင်လည်းခွဲစိပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ မနက် သုံးပတ်၊ နေ့လည် သုံးပတ် ည သုံးပတ်ပေါ့။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ တကယ်လုပ်ကြည့်ပါ။ပထမအကြိမ် မထူးခြားသေးရင် ဒုတိယအကြိမ် ဆက်လုပ်လိုက်ပါ။ တစ်ကြိမ်မှာတော့ ဆုတောင်းပြည့် လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ကံဇာတာတွေ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။
ပုတီးစိပ်နည်းလေး ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ပုတီးတစ်လုံးချ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ။ပုတီးတစ်လုံးချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပုတီးတစ်လုံးချ အရဟံ တစ်လုံးချ သမ္မာသမ္ဗုဒေါ္ဓ တစ်လုံးချ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော သုဂတော လောကဝိဒူ အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရထိ သထ္ထာဒေဝမနုဿ ာနံဗုဒေ ဘဂဝါ ပုတီးတစ်လုံးချ ဟေတု ပစ္စယော ပုတီးတစ်လုံးချ အာရမ္မဏ ပစ္စယော ပုတီးတစ်လုံးချ
အဓိပတိ ပစ္စယော ၊အနန္တရ ပစ္စယော၊ သမနန္တရ ပစ္စယော၊သဟဇာ ပစ္စယော၊အညမည ပစ္စယော၊နိဿယပစ္စယော၊ဥပနိဿ ယပစ္စယော၊ပုရေဇာတ ပစ္စယော၊ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယော၊အာသေဝန ပစ္စယော၊ကမ္မ ပစ္စယော၊ဝိပါက ပစ္စယော၊အာဟာရ ပစ္စယော၊ဣန္ဒြိယ ပစ္စယော၊ဈာန ပစ္စယော၊မဂ္ဂပစ္စယော၊သမ္ပယုတ္တ ပစ္စယော၊ဝိပ္ပယုတ္တ.ပစ္စယော၊
အတ္ထိ. ပစ္စယော၊နတ္ထိ. ပစ္စယော၊ဝိဂတ..ပစ္စယော၊အဝိဂတ ပစ္စယော ဆိုပြီး ပုတီးတစ်လုံးစီ ချသွားပါ…ပြီးရင် သရဏဂုံ သုံးပါးကနေ ပြန်စိပ်လိုက်ပါ။တစ်ခေါက်လျှင် ပုတီး၃၆ လုံးဖြစ်ပြီး သုံးခေါက်စိပ်လျှင် ပုတီးတစ်ပတ်ရပါသည်။ကံဇာတာတွေ ထူးခြားလာ၍ ကံကောင်းခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သူမ်ား အတြက္ ပုတီးစိပ္နည္းေလး ေပးပါ့မယ္။ ပုတီးစိပ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စိပ္လို႔ရပါတယ္။ တခုခုကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ စိပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ဦးဇင္းေပးတဲ့ ပုတီးစိပ္နည္းေလးကို ေအာက္မွာ ေရးေပးထားပါတယ္။ တခၚတေလ ကိုယ့္ဘဝမွာအခက္အခဲတခုခုႀကဳံလာရင္ တေန႔(၉)ပတ္စိပ္ၿပီး (၉)ရက္ အဓိ႒ာန္ဝင္ၿပီး စိပ္ၾကည့္ပါ။
တစ္ ရက္တည္း( ၉ )ပတ္ကို တခါတည္း မစိပ္ႏိုင္ရင္လည္း ခြဲစိပ္လို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ မနက္ သုံးပတ္၊ ေန႔လည္ သုံးပတ္ ည သုံးပတ္ေပါ့။ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ တကယ္လုပ္ၾကည့္ပါ။ပထမအႀကိမ္ မထူးျခားေသးရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္လုပ္လိုက္ပါ။ တစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဆုေတာင္းျပည့္ လာပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ကံဇာတာေတြ ထူးျခားလာပါလိမ့္မယ္။
ပုတီးစိပ္နည္းေလး ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ။ ပုတီးတစ္လုံးခ် ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ ပုတီးတစ္လုံးခ် သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ပုတီးတစ္လုံးခ် အရဟံ တစ္လုံးခ် သမၼာသမၺဳေဒါၶ တစ္လုံးခ် ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ သုဂေတာ ေလာကဝိဒူ အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ သထၳာေဒဝမႏုႆ ာနံ ဗုေဒ ဘဂဝါ ပုတီးတစ္လုံးခ် ေဟတု ပစၥေယာ ပုတီးတစ္လုံးခ် အာရမၼဏ ပစၥေယာ ပုတီးတစ္လုံးခ်
အဓိပတိ ပစၥေယာ ၊အနႏၲရ ပစၥေယာ၊ သမနႏၲရ ပစၥေယာ၊သဟဇာ ပစၥေယာ၊အညမည ပစၥေယာ၊နိႆယ ပစၥေယာ၊ဥပနိႆ ယ ပစၥေယာ၊ပုေရဇာတ ပစၥေယာ၊ပစာၦဇာတ ပစၥေယာ၊အာေသဝန ပစၥေယာ၊ကမၼ ပစၥေယာ၊ဝိပါက ပစၥေယာ၊အာဟာရ ပစၥေယာ၊ဣျႏၵိယ ပစၥေယာ၊စ်ာန ပစၥေယာ၊မဂၢပစၥေယာ၊သမၸယုတၱ ပစၥေယာ၊ဝိပၸယုတၱ.ပစၥေယာ၊
အတၳိ. ပစၥေယာ၊နတၳိ. ပစၥေယာ၊ဝိဂတ.. ပစၥေယာ၊အဝိဂတ. ပစၥေယာ ဆိုၿပီး ပုတီးတစ္လုံးစီ ခ်သြားပါ… ၿပီးရင္ သရဏဂုံ သုံးပါးကေန ျပန္စိပ္လိုက္ပါ။တစ္ေခါက္လွ်င္ ပုတီး၃၆ လုံးျဖစ္ၿပီး သုံးေခါက္စိပ္လွ်င္ ပုတီးတစ္ပတ္ရပါသည္။ကံဇာတာေတြ ထူးျခားလာ၍ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ရေးဆွဲသူအနည်းငယ်သာ ရှိတော့တဲ့ ရှားပါးစာရင်းဝင် ပုလင်းပန်းချီ
သားသမီး ၉ယောက်ရှိရာ အိမ်ကိုရောင်းပြီးအမွေခွဲဝေပေးပြီးချိန်မှာတော့ အမေအိုကြီးကို မည်သူကမျှ မပြုစုမစောင့်ရှောက်ချင်ကြ၍ လမ်းဘေးအိပ်လမ်းဘေးစားဘဝကို ရောက်ခဲ့ရသော မိခင်